Kwegore rapfuura, takaedza mhinduro dzakasiyana dzevatengi vedu veB2B kuti vanyatsoona vashanyi vewebhusaiti. Vanhu vari kushanyira yako saiti mazuva ese - vatengi, vatungamiriri, vakwikwidzi, uye kunyangwe midhiya - asi zvakajairika analytics haisi kupa nzwisiso mumabhizimusi iwayo. Nguva imwe neimwe munhu paanoshanyira webhusaiti yako, nzvimbo yavo inogona kuzivikanwa neiyo IP kero. Iyo IP kero inogona kuunganidzwa neyechitatu bato mhinduro, kuzivikanwa kunowedzerwa, uye ruzivo rwunotumirwa kwauri semutungamiri.
Mimwe yemhinduro dzataive nadzo dzaive dzichishanda kubva kudhara dhata, dzimwe dzaive nematanho anotyisa, mamwe akange asina sarudzo dzekukwiridzira mishumo… zvaishungurudza. Isu takatosaina kondirakiti yemhinduro imwe isina kumbobvira yagadzirisa yavo data kana interface uye ivo havazotirega isu tibude muchibvumirano chedu. Seizvo vanhu vekuDemandbase vakanyora, Kuzivikanwa kwekambani kwakanyanyisa kupfuura iwe zvaunofunga.
B2B makambani ari kuona zvinoshamisa mhedzisiro nekushandisa masevhisi senge Demandbase. Chiitiko pane webhusaiti yako uye nekutsvagurudza kwakabatana kwakaunza makambani ikoko kunobatsira kutungamira zvibodzwa, kuisa pamberi, uye kunzwisisa izvo izvo zvingave zvichitarisirwa nemutengi kana mutengi. Iko kugona kwekuona iyi data mune chaiyo-nguva kunogona kubatsira yako inobuda timu kusangana netarisiro kana iyo nguva iri yakakosha - sezvo ivo vari kutsvaga zvigadzirwa zvako kana masevhisi.